Archive du 16-août-2021
Governemanta vaovao Nesorina ireo minisitra mpifamaly amin’ny depiote
Voatendry sy natolotra omaly 15 aogositra ireo mpikambana vaovao mandrafitra ny governemanta. Ankoatra ny fitomboany dia saika ireo Minisitra
Tafatsangana indray izany ny antsoina hoe : governemantan’ny asa araka ny nanambaran’ny Filoham-pirenena azy omaly.
Vaky trano teny Antanetibe Ilafy Nentin’ireo jiolahy hatramin’ny sakafo
Tokantrano iray no indray notafihina jiolahy miisa 7 teny Antanetibe Ilafy ny Zoma alina nifoha Sabotsy lasa teo tokony ho tamin’ny 11 ora sy 40 minitra.
Fisolokiana fidirana ho mpianatra ho zandary Raim-pianakaviana iray very vola 6.600.000 Ar
Raim-pianakaviana iray indray no tonga nitaraina tao amin’ny zandarimariam-pirenena ao Mandritsara ny 09 aogositra teo fa voasoloky vola 6.600.000 Ar
Tsy fahatokisana 100% ny TGV-MAPAR Nomena toerana ny ADN, Arema, Antoko Maitso
Miova indray ny fomba fiasa sy fijery tamin’ny endriky ny governemanta. Tsy mitovy amin’ny làlan-tsaina novoizin’I Andry Rajoelina tany am-piandohana hoe:
Vaksiny - Covid 19 Tonga ny Astrazeneca 200 000 isa nomen’ny Frantsay
Omaly alahady 15 aogositra maraina no nigadona teny Ivato ny fiaramanidina mpitatitra entana an’ny Turkish Cargo nitondra ireo vaksiny fanefitry ny Covid 19 dia ny Astrazeneca izany;
Antsanitia Mahajanga Mpanao vakansy iray maty an-drano
Tovolahy mpianatra iray vao 23 taona monja avy aty Antananarivo no maty an-drano tao Antsanitia Mahajanga ny faran’ny herinandro teo raha tonga hiala sasatra.
Fanampiana any atsimo nisy nanodina 21 no voasambotra, 12 naiditra am-ponja, 2 mpiasan’ny PAM
3 taona izay no tsy nisian’ny orana tany amin’ny faritra Atsimo, raha ny tatitra voaray avy eo anivon’ny Filankevitry ny fampihavanana Malagasy ny faran’ny herinandro teo.
Minisitry ny atitany teo aloha Hatao fanadihadiana amin’izay ?
Maro no nanantena sy nihevitra, fa isan’ireo tsy ho voakitikitika tao anatin’ny governemanta ny Minisitry ny Atitany teo aloha Atoa Tianarivelo Razafimahefa. Ity farany, izay voasokajy hatramin’izay,
Fihariana Nitombo isa ny mpiompy akoho
Raha ny resaka fihariana akoho dia efa mandeha daholo ankehitriny na ny resaka “poulet de chair” na akoho manatody lava, hoy ny mpamokatra akoho sady veterinera eo anivon’ny orinasa Farmer Aviculteur,
Pr Ralison Roger « Ataovy mifanaraka amin’ny zava-misy ny vinan’asa »
Rehefa noana ny kibo, mivezivezy ny fanahy, hoy ny filohan’ny firaisankinan’ireo mpanolontsain’ny tetezamita teo aloha na ACS, ny Pr Ralison Roger.